Amathuluzi ama-5 okusiza ukuvumelanisa ukumaketha kwakho phakathi namaholide | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 3, 2016 UJohn Theis
Isikhathi sokuthenga sikaKhisimusi singesinye sezikhathi ezibaluleke kakhulu zonyaka kubathengisi nabakhangisi, futhi imikhankaso yakho yokumaketha idinga ukukhombisa lokho kubaluleka. Ukuba nomkhankaso osebenzayo kuzoqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho uthola ukunakwa okufanele ngesikhathi esinenzuzo enkulu yonyaka.
Ezweni lanamuhla indlela yesibhamu ngeke isasika lapho izama ukufinyelela kumakhasimende akho. AbakwaBrands kumele benze ngokwezifiso imizamo yabo yokumaketha ukuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye zabathengi. Cishe sekuyisikhathi sokuqala ukwakha leyo mikhankaso yamaholide ebalulekile, ngakho-ke sesihlanganise uhlu lwamathuluzi aku-inthanethi okusiza emizameni yakho yokukhomba ukumaketha kwakho.
Akumangazi ukuthi iGoogle ikwazile ukudala iwebhu ethandwa kakhulu analytics isudi emhlabeni, nge -Google Analytics. Le software inikezela ngemininingwane yokuthi ngubani ovakashela isiza sakho, ukuthi bafike kanjani lapho, futhi ukugcwalisa ngezenzo zabo uma sebekuwebhusayithi yakho. Sebenzisa lolu lwazi olusha ukuthola izingxenye zamakhasimende zakho ezinenzuzo enkulu futhi udale imilayezo yokumaketha ngokufanele.
I-Google Analytics ilungele amabhizinisi amakhulu namancane njengoba i-suite itholakala kumodeli ye-freemium. Ezingeni eliphakeme lesoftware kukhona ukutholakala kwe-SDK yokuhlaziya ukusebenza kohlelo lwakho lokusebenza lweselula namakhasimende.
Salesforce Ifu Lokumaketha iyithuluzi eliwusizo ngokumangalisayo lokuthumela i-SMS nezaziso zohlelo lokusebenza njengezaziso zeselula, ukuphatha ukumaketha kwe-imeyili, ukuphatha imikhankaso yezikhangiso ngedatha ye-CRM, nokuqoqa ukuziphatha kokuphequlula komthengi.
Ukuhlanganisa la mathuluzi kunikeza amathuba amaningi wokudala iphimbo lomkhiqizo elingaguquguquki kuyo yonke imizamo yakho yokumaketha. Ithuluzi ngalinye livumela izindlela eziningi zokulandelela ukusebenza kwamakhasimende futhi likuvumela ukuthi ukhombe ingxenye ngayinye uqobo. Ukwehla okukodwa ukuthi iSalesforce iza nenani lentengo eliningi, okungenzeka lingenzeki ezinkampanini eziningi ezincane.
Inventory ingaba nethonya elinamandla lokuthi unquma kanjani ukumaketha kumakhasimende akho. Noma ngabe uzama ukukhuthaza into ebibhajwe emashalofini akho amasonto, noma ukhangisa ukuthunyelwa okusha komthengisi othengisa kakhulu, uzodinga ithuluzi lokuphathwa kwempahla, okuyilapho I-BizSlate uyangena.
Izixazululo zokuphathwa kwempahla nokuhleleka, ukwabiwa kwempahla, kanye nokubalwa kwezimali, ukuhlanganiswa kwe-e-commerce nokuhlanganiswa kwe-EDI kwenza le software iphelele kumabhizinisi amancane naphakathi naphakathi. Okubaluleke kakhulu, kukuvumela ukuthi ulandelele okuthengwa ngabantu, kukusize ukuqondisa ukumaketha kwakho emizamweni ezayo.
Uma i-BizSlate ingalifanele ibhizinisi lakho, kukhona ukubulawa kweminye imikhiqizo yokuphathwa kwempahla lokho kungafanelana nezidingo zakho.
Uma ufuna ukukhiqiza imikhombandlela yamafomu akho webhizinisi afakwe kumawebhusayithi wakho, imithombo yezokuxhumana noma ama-imeyili angaba amathuluzi amahle. I-Formstack ikusiza ukuthi wakhe amafomu wesiko asheshayo futhi alula futhi ikuvumela ukuthi uhlaziye amazinga wokuguqulwa kwawo futhi ulinganise ukusebenza kwawo. Isoftware ikusiza ukuthi uhlole amafomu akho futhi uthole izinhlobo eziphumelele kakhulu zamafomu akho wokuthwebula okuholayo. Ngokwengeziwe, ungabona okuqukethwe kwamafomu agcwaliswe ngokwengxenye angakaze afakwe.
Lapho ususebenzise amafomu akho aku-inthanethi ukuthola ukuhola ungasebenzisa ifomu elisha ukusunduza ukuthengisa. Kungani ungasebenzisi enye ifomu ukuphinda uhlanganyele amakhasimende ngemuva kokuthenga kwawo nefomu lempendulo elihambisana nokuthenga kwawo?
Thumela i-imeyili ku-Acid
Ukumaketha nge-imeyili kuhlala kuyinto ebalulekile kunoma yiliphi isu lokumaketha, futhi kufanele uhlale ukhathazekile ngokuthi ama-imeyili akho abukeka kanjani kumakhasimende akho emabhokisini abo okungenayo. Ama-imeyili akho kufanele abambe iso ngenkathi ehlala ethembekile kumkhiqizo wakho. Ufuna ukuthi ama-imeyili akho abukeke kahle kuwo wonke amaklayenti e-imeyili angabukwa kuwo. Uma lokhu kubonakala kuyinselelo impela, ungakhathazeki, Thumela i-imeyili ku-Acid iyatholakala ukusiza.
Ipulatifomu ivumela ukwenziwa kwama-imeyili e-HTML kusihleli esiku-inthanethi, ukuze ukwazi ukubuka kuqala ukubukeka kwe-imeyili yakho kunqwaba yamakhasimende, ulungiselele ikhodi ngayinye, futhi ulandelele ukusebenza kwemiyalezo yakho nge analytics suite. Sebenzisa lezi zici ukuze uzuze futhi wenze ama-imeyili angawakho ngokuphelele ukuze ubandakanye amakhasimende akho futhi wandise intshisekelo yokuthenga.
Manje njengoba unamathuluzi owadingayo ukwakha izinhlelo zakho zokumaketha ngamaholide, ungangena emsebenzini wakhe amasu akho. Ukhiye wempumelelo ukuqala kusenesikhathi, ukukuvumela ukuthi uvivinye umkhankaso wakho ngokwanele, futhi wenze noma yiziphi izinguquko ngaphambi kokuba kufike amaholidi. Ukwenza imilayezo yakho yokumaketha kube ngokwakho kuzoqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho ubona impumelelo kule sizini.
Tags: imeyili ku-asidiI-google analyticsifu lokuthengisa labasebenzi
UJohn Thies uyi-CEO kanye noMsunguli we- Thumela i-imeyili ku-Acid, insizakalo enikeza abathengisi be-imeyili ukubuka kuqala kokuthi ama-imeyili abo akhonjiswa kanjani kumakhasimende we-imeyili athandwa kakhulu nakumadivayisi eselula. Uhlala eDenver, eColorado nonkosikazi wakhe nendodana yakhe. Lapho engasebenzi usenkundleni yegalufu noma eqhweni eqhweni e-Colorado powder entsha.
Ngabe Singakuthokozela Ukwenza Okuhle Ekuzikhangiseni?